Bronchiolitis - ဒီအများဆုံးမကြာခဏကလေးငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုသော bronchi ရောဂါများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြီးထွားလာသက်ရှိအတွက်ကာကွယ်ရေးယန္တရားများနေဆဲဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ပိုးကူးစက်မှုသည်အဲယားဝေးရတဲ့နှင့် bronchi နှင့် bronchioles ၏ဝေးတိုတိုထိုးဖောက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်။ သူတို့ဟာ mucosal ရောင်ရမ်းခြင်းအဆီးအတားမှဦးဆောင်ပြုလုပ်ခက်ခဲကလေးများအသက်ရှူခြင်းစေသည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်မှာ bronchiolitis များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျရောက်နေတဲ့နေသောကလေးများအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းကလေးများပါဝင်သည်။ အဆိုပါအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပွားမှု 2-6 လအသက်အရွယ်အကြားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Bronchiolitis Intrauterine ရောဂါကူးစက်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မွေးကင်းစကလေးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရှားပါးမဟုတ်သေဆုံးမှုသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောရောဂါဗေဒ bronchopulmonary စနစ်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစအတွက် bronchiolitis ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အကြောင်း 90% rinosintsitialnaya ပိုးကူးစက်မှုသည်။ အများစုကတော့ရောဂါလက်ရှိဆား၏တတိယနေ့၌ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ bronchiolitis ၏အဓိကလက္ခဏာမြန်နှုန်း wheezing နှင့်မြည်, အသက်ရှုမဝြခင်းအားဖြင့်လိုက်ပါသွားခံရဖို့စတင်သည်သောခိုင်ခံ့သောခြောက်သွေ့တဲ့ချောင်းဆိုးဖြစ်ပါသည်။ နှေးကွေးဖြစ်လာထိုသူငယ်အားဖြင့်, ကသိသိသာသာအစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။
စူးရှသော bronchiolitis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကလေးများအားလုံးကိုဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေလျှင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒီရောဂါမျက်နှာ cyanosis, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော tachycardia ဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။
ကလေးများအတွက် bronchiolitis obliterans ၏လက္ခဏာများ
bronchiolitis obliterans ဟုခေါ်တွင်ပြင်းထန်သောရောဂါ။ ဒီရောဂါနှင့်အတူ5ကလေးများ - ဒါဟာမှ4အဆုတ်ပညာစင်တာကျဆုံးခြင်းအတွက်မရှိသလောက်တွေ့နိုင်အောင်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ bronchiolitis bronchioles နှင့်အသေးစား bronchi ၏ဤအဆင့်မှာပိတ်ဆို့ဖြစ်လာများနှင့်အဆုတ်သွေးစီးဆင်းမှု၏ချိုးဖောက်မှုလည်းမရှိ။
bronchiolitis obliterans ၏အဓိကလက္ခဏာပင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အလင်းဝန်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအသက်ရှုတိုးပွားလာရင်ကြပ်နှင့်အတူပြင်းထန်သောချောင်းဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လူနာလှည်း, စီများမှုတ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာ၏ဝိသေသ။ ဒီရောဂါမကြာခဏဆိုတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်တည်ဆဲလက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးရွားလာမရှိသည့်အခါ "နွမ်း" ၏ကာလအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
ကလေးများအတွက် bronchiolitis ၏ကုသမှု
bronchiolitis ကုသမှုရောဂါ၏ရုပ်ပုံပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အခါ။ လိပ် expectoration ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ယင်း၏အပူချိန်လျှော့ချ: Key ကိုအတိုင်းအတာလက္ခဏာများ addressing ကိုရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့လူနာအပူချိန်ကိုလျှော့ချသည်ဟုနွေးအချိုရည်, expectorants နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကလေးကပဒေသာသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအစပဋိဇီဝဆေးသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ရောဂါခက်ခဲလျှင်, ကလေးကဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူစေခြင်းငှါစေလွှတ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် bronchiolitis ၏ဟောကိန်းသက်တံ့မဟုတ်: ရောဂါအပြီးကလေးအတော်များများ bronchial အဆီးအတားများနှင့် bronchopulmonary ရောဂါများအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ syndrome ရောဂါလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၏အန္တရာယ်သူငယ်ကိုမတည့်တုံ့ပြန်မှုမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အစရှိပါသည်။
ကလေးများအတွက် urinary incontinence ဝမ်း
ကလေးများအတွက် Adenoids - ရောဂါလက္ခဏာ
ကလေးများအတွက်သည် Norma သွေးသကြားဓာတ်
ကလေးသူငယ်အခဥယျာဉ်တော်၌မကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်ပါသည် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ကလေးသူငယ်အခအတွက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန် - ဘာလုပ်သနည်း
ကလေးများအတွက် syndrome ပိရမစ်ကြီးမလုံလောက်
သဘာဝကကျောက်ခဲတို့မှပုတီး - သူတို့ဘာတွေဖြစ်ကြပြီးအဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်,
လစဉ်အနည်းဆုံး Djufaston နှောင့်နှေး
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ: "အစေခံရန်, အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန် - ကရွားလှရဲ့!"
မင်းသားအဲလ်ဘတ် II ကို, မင်းသမီး Charlene နှင့် Starship Troopers မိုနာကိုအတွက်ဖော်မြူလာ 1 လည်ပတ်ခဲ့
ကမ်းခြေဝတ်ဆင်ဖို့မပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းအသက် 30 အသည်းအသန်ရယ်စရာရေချိုးဝတ်စုံ!